थाहा खबर: सुशील कोइरालाको सम्झनामा प्रदीप गिरि- 'कांग्रेसमा निजामतिकरण गतिलो उदाहरण'
सुशील कोइरालाको सम्झनामा प्रदीप गिरि- 'कांग्रेसमा निजामतिकरण गतिलो उदाहरण'
उहाँका अन्तिम वर्षहरु निराशाजनक रहे
फोटो साभारः panoramio.com
जोरसोरले महाधिवेशनको तयारी चलिरहँदा सभापति सुशील कोइरालाको निधन भएपछि नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा धेरै तरंगित भएको छ। भनिन्थ्यो- कोइराला पुन: सभापति पदको आकांक्षी हुनुहुन्थ्यो। उहाँको निधनले कांग्रेसलाई के फरक पर्छ? कांग्रेस नेता प्रदीप गिरिलाई थाहा रेडियो नेटवर्कले सात प्रश्न सोधेको छ।
पछिल्लो समयमा तपाईँ उहाँको स्वास्थ्यस्थितिबारे कत्तिको जानकार हुनुहुन्थ्यो? के तपाईँका लागि पनि उहाँको निधनको खबर उत्तिकै अप्रत्यासित थियो–जति आम सर्वसाधारणलाई लागिरहेको छ?
उहाँलाई क्यान्सर थियो। क्यान्सरको अप्रेसन पनि गरिएको थियो। तर उहाँको मृत्यु क्यान्सरकै कारण भए झैं देखिँदैन। यद्यपि उहाँको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुँदै गएको थियो। उहाँको स्वास्थ्यस्थितिबारे यत्ति त सबैले जान्दथे।
उहाँको निधनपछि अब उहाँको जीवनको मुल्यांकन गर्नु वस्तुनिष्ठ हुन्छ। सुशील कोइरालाको नाम लिने बित्तिकै तपाईँ के सम्झनुहुन्छ?
जस्तै पाशविक मान्छेमा पनि केही भावुकता रहन्छ मृत्युको बारेमा। मृत्यूबारे कोही पनि निरपेक्ष रहन सक्दैन। सुशील कोइरालाको कुरा गर्दा उहाँले होस सम्हालेदेखि कोइराला परिवारको सेवामा आफूलाई दिन रात लगाउनुभयो। कोइराला त उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो। कोइराला भनेर म बीपी र गिरिजाप्रसादको कुरा गर्दैछु। बिबाह गर्नुभएन। निश्चय नै उहाँको जीवनलाई सादगीपूर्ण भन्न सकिन्छ। आजकल राजनीति अर्कै भएको छ। मान्छे यहाँ हिसाब लगाएर आउँछन्। एक सय रुपैयाँ लगाएर पाँच सय कमाउँछु भनेर आँउछन्। त्यस्ता प्रवृत्तिबाट सुशील कोइराला मुक्त हुनुहुन्थ्यो। मुख्य कुरा यो हो। यो उहाँको सबभन्दा सकारात्मक पक्ष हो। यसबाट आजको युवापिँढीले वा सबैले, जो कहिलेकाँही यसो अडेर जीवनको बारेमा सोच्दछ– जीवन के हो, मृत्यु के हो, मनुष्यले जीवनमा के हासिल गर्छ, यो दौडधुप केका लागि हो, किन हामी स–साना छुद्रतालाई अंगिकार गरिराखेका छौं भन्नेजस्ता विषयमा सुशीलको जीवनलाई हेरेर एउटा तात्विक निष्कर्षमा पुग्न सक्छ।
उहाँले सबैभन्दा धेरै दोहोर्‍याउने शब्दमध्येको एक थियो– डेमोक्रेसी। उहाँको छवि प्रजातन्त्रप्रति प्रतिबद्ध नेताको छ। उहाँको जीवनको मुल विश्वास के थियो? कुन मान्यताले उहाँलाई आजीवन डोहोर्‍यायो?
सुशीलको पुस्ता मेरो पुस्ता पनि हो। प्रजातन्त्रका लागि हामीले सँगै संघर्ष गरेका हौं। त्यतिखेर पञ्चायतविरुद्ध लड्दा अरु नारा वा अरु माग प्राथमिक थिएन– प्रजातन्त्रै मूख्य थियो।
द्वित्तीय विश्वयुद्धपछि दुनियाँमा केही राजनितिक परिवर्तनहरु देखिएका थिए। एकातिर कम्युनिस्टरुले एकदलीय व्यवस्था कायम गरे- जस्तो कि सोभियत युनियन र चीन। उनीहरुले जनवादी गणतन्त्र चाहिन्छ भने र त्यै अनुरुपको अभ्यास गरे। जनवादी गणतन्त्रमा लेख्ने-बोल्ने आजादी, पार्टी खोल्ने आजादी र चुनाव लड्ने परिपाटी हुँदैनथ्यो। अर्कातिर, एकथरीले प्रजातन्त्र चाहिन्छ भने। हाम्रो पुस्ताले बुझेको वा मानेको प्रजातन्त्रलाई कम्युनिस्टहरु बुर्जुवा प्रजातन्त्र भन्थे। अब त्यो बुर्जुवा हो कि होइन, थियो कि थिएन अलग विषय हो। तर निश्चय नै हामी एउटा व्यवस्थाका पक्षमा लड्यौं, जसमा बालिग मताधिकारका आधारमा चुनाव हुने, निश्चित समयमा चुनाव हुने, दल खोल्ने अधिकार हुने, भाषण इत्यादि गतिविधि गर्न पाउने परिपाटी हुन्थ्यो।
सुशील कोइराला त्यही प्रजातन्त्रका लागि लड्नुभएको हो। त्यो प्रजातन्त्रको नकारात्मक पक्ष पनि थियो। त्यो पुँजीवादी प्रजातन्त्र थिएन ! बुर्जुवा प्रजातन्त्र त थिएन ! तैपनि समाजवादको जुन सार तत्व हो त्यसलाई ओझेलमा राख्ने काम भने यसले गर्‍यो। भन्न के खोजेको भने लगत्तै विश्वयुद्धपछि शीतयुद्ध आयो। शीतयुद्धमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनहरुले अरुलाई धुलो चटाउने नाममा प्रजातन्त्र शब्दमात्रै बाँकी राखेर यसका अरु सार तत्वलाई बिर्सिदिए। त्यसैले सुशील कोइरालाको प्रजातन्त्र पनि अरु सामाजिक वा आर्थिक परिवर्तनका लागि जति हुनुपर्दथ्यो, त्यति जागरुक भने थिएन।
उहाँको राजनितिक र व्यक्तिगत जीवन एकै थियो कि, यी फरक-फरक कुरा हुन्?
मेरो उहाँसँग बनारसदेखिको संगत हो। पछि नेपाल फर्किएपछि एउटै पार्टीमा रहेपनि हाम्रो राजनीतिक धार केही भिन्न रह्यो। उहाँ गिरिजाबाबुको एक्का भएर रहनुभयो। सुशीलले गिरिजाबाबुले गर्नुभएका सम्पूर्ण गतिविधिलाई सघाउँदै जानुभयो। हामीले आलोचना गर्दै गयौं। खासगरी पार्टी सञ्चालनको तौरतरिका हेर्ने हो भने गिरिजबाबुलाई भन्दा पनि सुशील कोइरालालाई बढी भार हुन्थ्यो। सुशीललाई अघि सारेर गिरिजाबाबु आफ्नो सारा काम लिनुहुन्थ्यो। तर म आजैका दिनमा सुशील कोइरालाका थप क्रियाकलापबारे त्यति टिप्पणी गरिहाल्न चाहन्न।
एउटै कुरा भन्छु, पार्टी जीवनमा आफूलाई पूर्णत समर्पित गरेर, आफ्ना अन्य सानातिना महत्वकांक्षा, परिवारिक र भावनात्मक आग्रह छाडेर सुशील आजीवन पार्टीमा लाग्नुभयो। त्यसका लागि हामीले उहाँलाई नमन गर्नैपर्छ। एक हदसम्म यो काम अघि कृष्णप्रसादले गर्नुभएको थियो। अब सुशीलको पालामा उहाँको कार्याकालमा पार्टी कसरी चल्यो, आज कसरी चलेको छ, एकपटक नराम्ररी चुनाव हारेको पार्टी पछि फेरि अलि माथि आयो– यी सब कुराहरुलाई हामीले भावुक नभइकन स्थिर भएर सोच्नुपर्छ। भावुकताबाट उम्किइसकेपछि यो विषयमा फेरि कुरा गरौंला।
बनारसदेखिको सहकार्य स्मरण गर्नुभयो। उहाँको सन्ध्याकालमा चाहिँ तपाईँ कत्तिको संगतमा हुनुहुन्थ्यो? केकस्ता विषयमा कुराकानी हुन्थे?
पछिल्लो समयमा त्यति थिएन। कहिलेकाँहि वर्किङ कमिटिमा भेट हुन्थ्यो, त्यत्ति हो। तपाईँलाई थाहै छ, म एकान्तप्रिय मान्छे हुँ। लेखपढमा धेरै समय बिताउँछु। सुशीलसँगमात्रै होइन, अरु साथीहरुसँग पनि मेरो उति बाक्लो भेटघाट हुँदैन।
तपाईँले कांगेसका धेरै नेतृत्वसँग काम गर्नुभयो, कांग्रेस सभापतिको रुपमा तपाईँले उहाँलाई कस्तो पाउनुभयो?
उहाँ जब सभापति हुनुभयो, त्यो तथ्यलाई हामीले स्वागत गर्‍यौँ। मैले त्यतिखेरै भन्याथेँ, उहाँको व्यक्तित्वमा त्यति चमक छैन, तैपनि व्यक्तित्व नै सम्पूर्ण कुरा पनि होइन। सभापति भइसकेपछि उहाँबाट केही आशा थियो कि पार्टीका विभिन्न कमिटिहरुलाई पुनर्गठन गर्नुहोला, विभिन्न विभागहरुलाई संयोजन गर्नुहोला, कार्यसम्पादन समिति खडा गर्नुहोला– त्यो भएन। मधेसको अहिले जुन समस्या छ– भोलि के हुने हो त्यो पनि थाहा छैन- त्यतातिर पनि खासै केही भएन। यो हिसाबले उहाँका अन्तिम वर्षहरु केही निराशाजनक रह्यो।
उहाँको निधनले पार्ने प्रभावको कुरा गरौं। लामो समय राजनीतिमा सकृय रहनुभएका, जीवनको उत्तरार्धमा देशकै ठूलो दल कांग्रेसको नेतृत्व गर्नुभएका र अत्यन्तै संवेदनशील समयमा सरकारको समेत नेतृत्व गर्नुभएका सुशील कोइरालाको निधनले जारी राजनितिक प्रकृयामा के अन्तर पार्छ? खासगरी कांग्रेसलाई के फरक पर्छ?
पहिले यो कुरा बुझ्नुस्, सुशील कोइराला कसरी एकसाथ नेपाली कांग्रेसको सभापति र सरकारको प्रधानमन्त्री हुन पुग्नुभयो ! पहिले उहाँको राजनीतिक योगदानलाई हेरौं। सुशीलको सबैभन्दा ठूलो योगदान अद्‍भूत राजनीतिक निरन्तरता नै हो। पार्टीको घेरोबाट उहाँ कहिल्यै बाहिर निस्कन चाहनुभएन। पार्टीका नेताहरुको जे विचार थियो, त्यो नै उहाँको विचार थियो। उहाँले कुनै नयाँ विचार ल्याउनुभएन। यो के हो त? जसरी निजामती सेवामा एउटा सामान्य तहको कर्मचारीले हाकिमलाई रिझाउन सक्यो भने माथि माथि चढ्दै जान्छ र यथासमयमा सचिव उपसचिव सम्म हुनसक्छ। पर्टीभित्र पनि यस्तै हुन्छ। सुशील कोइराला कांग्रेसमा निजामतिकरण गतिलो उदाहरण हुनुहुन्छ।
गिरिजाबाबुले चुनौति मोलेर माओवादीलाई मूलधारमा ल्याउनुभयो। बीपी एकपटक हतियार उठाउनतिर लाग्नुभयो अर्कोतिर राजासँग मिल्ने कुरा गर्नुभयो। कृष्णप्रसादले सधैँभर सत्याग्रह सत्याग्रह भनिराख्नुभयो। त्यस्तै सुवर्णबाबुले पहिल्यै भन्नुभएको थियो– बाहिर गएर केही गर्न सकिँदैन, जे गर्ने हो यहीँ गर्नुपर्छ। तर, सिङ्गो नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा सुशील कोइरालाले फलानो बेला फलानो कुरा राख्नुभयो भन्ने सुनिएको छैन। अथवा फलानो नेतासँग मत बझाउनुभयो भन्ने सुनिएको छैन। यति हुँदाहुँदै पनि सुशील कोइरालाले नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा जति सत्ता प्राप्त गर्नुभयो, जति अधिकार प्राप्त गर्नुभयो, त्यति अरु कसैले प्राप्त गरेको छैन। न गिरिजाप्रसाद, न कृष्णप्रसाद ! बीपीको त कुरै छोड्नुस्। यो पार्टी निजामतिकरणको परिणाम थियो।
मलाई लाग्छ, सुशीलको अभ्यास सकिएपछि अब पार्टीभित्र नयाँ कुरा आँउछ। अब आफूले केही गरेर देखाएर मान्छेहरु अगाडि आउँछन्। पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धा बढ्छ। तत्काल आजको भोलि नै केही हुन नसक्ला, तर अब नयाँ पुस्ताले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व गर्ने समय आएको छ। हिजोको ब्याज भजाएर, निरन्तरताको कुरा सुनाएर अब केही हुँदैन। सुशीललाई श्रद्धाञ्जलि दिँदै अहिलेलाई हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यही हो।
थप बल्झिँदै अमेरिका-इरान विवाद
देउवामाथि खनिए सिलवाल : विगतको गल्तीका लागि सार्वजनिक माफी माग्नुस्
सिएमसीले विद्यार्थीबाट लिएको बढी शुल्क ३० दिनभित्रमा फिर्ता गर्ने, आन्दोलन स्थगित
डेंगुको महामारी छल्दै 'डुलुवा मन्त्री' : विदेश घुम्‍न व्यस्त, छोरोसहित पुगे अमेरिका
बिरामी हुनेगरी विद्यार्थी कुट्ने शिक्षकलाई कारबाही माग
अरुणमा बेपत्ता यात्रु र जिप नभेटेपछि फर्कियो गोताखोर टोली